Home Wararka Farmaajo oo qorsheynaya in uu doorasho 16 kursi ah ku qabto Garbahaareey
Farmaajo oo qorsheynaya in uu doorasho 16 kursi ah ku qabto Garbahaareey
Degmada Garbahaarey xarunta Gobolka Gedo waxaa ka socda howlgallo ay wadaan Hay’adaha ammaanka, waxaa la xareeyay Gaadiidka noocyadiisa kala duwan si loo baaro loona diiwaangeliyo dadka iska leh.
Talabaadan ayaa daba socda qorsho uu Farmaajo ku doonayo in uu magaalada Garbahaareey ku qabto doorashada 16ka kursi ee loo asteeyay qabiilada ku dhaqan Gobolka Gedo. Qorshaha Farmaajo ayaa ah mid caqabad ku noqon doona doorashada uu doonayo in uu qabto Madaxweyne Axmad Madoobe.
Taliska Booliiska Garbahaarey ayaa Warbaahinta u sheegay in Baaristaan ay iska kaashanayaan Ciidamada Nabadsugidda, Booliiska iyo kuwa Xoogga Dalka oo si dhaw ula socda dhaqdhaqaaqa Dadka & Gaadiidka.
Gaashaanle Maxamed Jaamac Gaaciye Taliyaha Saldhigga Booliiska Degmada Garbahaarey ayaa u digay Milkiilayaasha Gaadiidka aan marin diiwaangelinta lagu sameynayo si Hay’adaha ammaanka u ogaadaan xogtooda oo dhammeystiran.
“Si aan u xaqiijino nabadgalyada Degmada Garbahaarey oo dhawaan ay ka dhaceyso Doorashada kuraas kamid ah Golaha Shacabka, waxa aan sameynay howlgallo aan ku uruurinayay Dhammaan Gaadiidka oo aan diiwaangelinay wadayaasha & Milkiilayaasha si aan ula socono dhaqdhaqaaqooda” ayuu yiri Taliyaha Booliiska Garbahaarey.
Gaashaanle Maxamed Jaamac Gaaciye Taliyaha Saldhigga Booliiska Degmada Garbahaarey waxa uu Shacabka Xarunta Gobolka Gedo ku sugan uga digay in ay guryahooda ka kireeyaan Dad aan la xaqiijin.
La shaqeynta Hay’adaha ku howlan sugidda Amniga Degmada Garbahaarey ayuu ka dalbaday Gaashaanle Maxamed Jaamac oo hadalkiisa sii raaciyay in gacan-adag lagu qabanayo nabadgalyada Degmadaas.
“Dhammaan Dadka ku dhaqan Garbahaarey in aan kawada shaqeyno nabadgalyada, dhawaan waxa aan fileynaa in ay bilaabato Doorashada Xildhibaannada Golaha Shacabka, waxa aan uga digeynaa in ay qarsadaan Cadawga, ciddii amarkaan jebisa waxa aan ku qaban doonaa Gacan-Adag”Waa sida uu yiri Taliyaha Saldhigga Booliiska Garbahaarey.
Degmada Garbahaarey xarunta Gobolka Gedo waxaa lagu dooranayaa 16 kursi oo Golaha Shacabka ah sida ku xusan heshiisyadii laga gaaray Doorashooyinka Dalka oo lagu jaan-gooyay in Dowlad-Goboleed weliba labo Magaalo uu ku doorto Xildhibaannada Aqalka Shacabka.
Previous articleMaleeshiyo beeleed ku dagaalay Galgaduud iyo khasaare ka dhashay
Next articleMeet Miss World Somalia, the first hijabi contestant in the pageant’s history
Dil ka dhacay duleedka degmada Balcad
Xildhibaanada Ceel Waaq oo Doorashada ka qeyb galaya & Farmajo oo...